Ohatrinona ny RAM ilaina amin'ny Mac-ko? | Avy amin'ny mac aho
Tsy misy fisalasalana, ity dia iray amin'ireo fanontaniana izay ho an'ny maro dia manana valiny tsotra, arakaraka ny maha-tsara ny RAM no tsara kokoa. Saingy amin'ity tranga ity no tadiavinay dia ny hitarika ireo mpampiasa izay mieritreritra ny hahazo Mac ary tsy te handany ny fiainany amin'ny fametrahana RAM be dia be izay tsy ho ampiasain'izy ireo any aoriana. Na ahoana na ahoana, tsara kokoa hatrany ny manota lava toy izay fohy amin'ny RAM an'ny Mac na PC, fa misy hatrany ny làlana afovoany izay mety hahasoa ny mpampiasa arakaraka ny asany izay tianao hatao amin'ny masinina.
Zavatra iray tokony hotadidina ao an-tsaina alohan'ny hanombohana ireo tarehimarika RAM dia io anio io vitsy ny Macs mamela ny mpampiasa hanova ny RAM amin'ny fomba tsotra na ampitomboy fotsiny rehefa mandeha ny fotoana. Ny Mac Pro amin'izao fotoana izao, ny Mac sasany ary ny iMac 27-inch amin'izao fotoana izao dia mamela antsika hampitombo ny RAM ary izany dia mahatonga antsika hieritreritra be rehefa eo alohan'ny masinina hividianantsika isika, satria ny safidintsika dia tsy maintsy maharitra taona vitsivitsy ary tohano ireo fanavaozam-baovao izay azo antoka fa hisy fiatraikany amin'ny fanjifana RAM, noho izany dia teboka iray tsy maintsy adino rehefa hividy Mac vaovao isika mba tsy hanana olana amin'ny ho avy.
Lojika fa tsy ny zava-drehetra dia ny RAM ao anaty Mac, tsy maintsy dinihinao ihany koa ny processeur sy ny kapila mangalatra fa na izany na tsy izany ny mpampiasa tsy dia za-draharaha dia mirona kokoa mijery ilay mpanera sy ilay kapila mafy mamela ny RAM, ary ity dia mety ho olana amin'ny ho avy rehefa manana fiainana mandritra ny roa taona ny milina.
4, 8, 16 na RAM hafa
Amin'ity tranga ity, ny zavatra hataontsika dia manomboka amin'ireo mpampiasa izay mividy Mac hivezivezy amin'ny harato nefa tsy manokatra tabilao be loatra miaraka amin'izay, miditra amin'ny tambajotra sosialy, mampiasa fitaovana mandeha ho azy amin'ny birao ary manamarina mailaka, ankoatr'ireo tsotra hafa. raharaha, miaraka amin'ny RAM 4 GB eo ho eo dia mihoatra ny ampy anio raha jerena fa amin'ny ho avy tsy dia lavitra dia mety ho latsaka isika ary ho an'ny asa sasany dia ho hitantsika ny "baolina miloko" mahazatra an'ny OS X. Ka ny tolo-kevitra dia ny hialanao io fahafaha-manao io raha afaka mandeha ianao ary mankanesa any amin'ny fanahafana manaraka. .
Miditra amin'ny RAM 8 GB isika izao. Ity ny habetsaky ny RAM ilaina amin'ny ankamaroan'ny asa azontsika atao miaraka amin'ny Mac anio sy mandritra ny fotoana fohy ny ankamaroan'ny mpampiasa. Midika izany fa midika hoe afaka miasa haingana araka izay tratra izy nefa tsy mitaky ny ambony indrindra avy amin'ilay masinina, fa manitsy amin'ny Final Cut, mampiasa Photoshop, iMovie, mivezivezy amina tabilao maro miaraka amin'izay amin'ny birao samihafa, ankoatry ny asa hafa , afaka milalao tsara amin'ireo RAM 8GB ianao.
Avy amin'ny RAM 16 GB ny milina ataontsika dia tena hahomby ary azo antoka fa mety ny fampifanarahana azy io hisorohana ny olana rehetra amin'ny resaka fangatahana RAM. Amin'ity habetsaky ny RAM ity sy amin'ny fampiasana ny OS X El Capitan amin'izao fotoana izao, afaka manao asa isan-karazany isika nefa tsy matahotra ny hianjera. Fanovana miaraka aorian'ny effets, Illustrator, Photoshop, Final Cut, iMovie ary miara-miasa amin'ireo kiheba Safari maro amin'ny birao samihafa. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny tolo-kevitra ho an'ny mpampiasa dia ny hisafidianana RAM 16 GB hankafizanao traikefa tsara amin'ny Mac.
Izay mihoatra ny 16GB RAM Ankoatry ny vidiny lafo be dia be dia tsy amporisihiko ho an'ireo mpampiasa izay tsy natokana ho an'ny fanovana horonantsary na horonantsary amin'ny Mac. Saika fandaniam-bola io raha tsy hampiasa fitaovana marobe miaraka amin'ny masinina isika, Ka ny torohevitra amin'ity tranga ity dia raha tsy matihanina amin'ity sehatra ity ianao, miaraka amin'ny RAM 16 GB dia afaka miasa mihoatra ny ampy amin'ny masininao ianao. Raha manam-bola ianao ary te-hampiasa azy dia miankina aminao fa ny fitantanana RAM amin'ny Mac dia tena tsara ary miaraka amin'ny 16 GB dia manana mihoatra ny ampy isika mandritra ny taona vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ohatrinona ny RAM ilaina amin'ny Mac-ko?
Sombra dia hoy izy:
Ary maninona no tsy nosoratanao momba ny 32gb, 64gb ary na 128gb aza (izay atolotry ny serivisy Mac tsy miankina sasany ho an'ny Mac Pro)?
Mamaly an'i Shadow
Salama aloka, misaotra tamin'ny anjara birikinao!
Tena mieritreritra aho fa mihoatra ny 16GB dia tsy ilaina amin'ny mpampiasa "normal", saingy mazava ho azy fa afaka mampiasa ny RAM tadiaviny na mieritreritra ny ilainy ny tsirairay. Ity dia lahatsoratra orientation ho an'ireo mpampiasa tonga amin'ny Mac na tsy miaina avy amin'ny masinin'izy ireo.
Apple dia manome 64GB farafahakeliny ho an'ny Mac Pro amin'ny fomba ofisialy ary tsy Mac ity izay ividianan'ny olona iray tsy matihanina, noho izany tsy ny ankamaroan'ny mpampiasa novolena amina magazay na amin'ny Internet no mividy Mac.
Salama, manana iMac 2019 aho, 27 santimetatra, nividy ondrilahy 8gb aho, rehefa afaka kelikely dia nividy 16gb miampy roa amin'ny 8, izao dia miasa amin'ny 24gb, roa amin'ny 8 ary roa amin'ny 4, miasa miaraka amin'i Adobe aho amin'ny fanovana sary, ny fanontaniako ve azo antoka ny fiarahana miasa amin'ireo fahatsiarovana ireo na dia tsy mitovy aza ny efatra? afaka manana olana ve aho amin'ny ho avy?
Vao avy nividy ny iMac 27 2019 tamin'ny 8 GB aho, ampiasaiko amin'ny pro-pro izy ary manao ny fitsapana dia fohy ihany araka ny nolazainao, nisafidy ny hanitatra azy hatramin'ny 24 GB aho, mikasika izay lazain'izy ireo raha hampiasa sampana an'ny Samy hafa ny fahaiza-manao dia mety hiteraka olana, efa firaketana an-tsoratra be ny tenako, satria ny iMac dia vokatra lafo vidy handaniam-bola tsy ilaina ary avy amin'izay hitako tsy misy olana raha toa ka mitovy ny MHz sy ny tara-tara. Aza matahotra.
JuankarlosIbz dia hoy izy:
Manana iMac aho tamin'ny taona 2017 miaraka amin'i Ram 24 GB, ilay 8 izay avy tamin'ny orinasa ary iray novidiko tamin'ny 16GB DDR4 2400Mhz tamin'ny marika Crucial ary mandeha lafatra izany, raha ny tena izy aho dia mieritreritra ny hividy 16GB hafa satria manana nilatsaka tamin'ny vidiny € 135 3 taona lasa izay ho an'ny fahatsiarovana 16GB ary ankehitriny izy ireo dia € 75 miaraka amin'ny fandefasana entana.
Valiny tamin'i JuankarlosIbz